प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला
KATHMANDUTemperature 24°CAir Quality91
नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
५ माघ २०७६ आइतबार
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाएर वाम गठबन्धन बनाउँदै गर्दा केपी ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको वाचा बाँधेका थिए । उनका सारथि पुष्पकमल दाहालले पनि होमा हो मिलाउँदै अब युद्ध, आन्दोलन र हडतालहरूको अध्याय सकिएकाले आर्थिक विकासको एजेन्डाबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता दिलाएका थिए ।
दुई वर्षअघि आफैँले तय गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हाम्रा नेताहरूले कति चाँडै बिर्से ! अक्सर ९–१० महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने देशमा ओली २४ महिनायता एक्लै प्रधानमन्त्री छन् । तैपनि राजनीतिक स्थिरताको आभास छैन । अस्वस्थताको अतिशय वेदनाले छटपटिँदा पनि ओली मनमौजी नै देखिन्छन् । उनका मन्त्रीहरूको मनोविज्ञान भने बिथोलिएको छ । कर्मचारीतन्त्र ओली शैलीसँग ढुक्क हुन सकिरहेको देखिन्न ।
सुशासनको अवस्था सबैभन्दा डरलाग्दो छ । ओली आफ्ना लागि काम गर्न धेरै समय नभएको बताउने गर्छन् । त्यसैले भय, लालच वा मोहमा नपरी असल शासन दिलाउन अग्रसर हुने उनको कथन छ । कथनी र करनीबीच बिस्तारै मोटो धर्सो कोरिँदै गएको छ । यातायात सिन्डिकेट, यती काण्ड, एयरपोर्टको ३३ किलो सुन र बालुवाटारको जग्गालगायत प्रकरण त केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।
आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेर संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अग्रसर छन् । तर तिनको सही दिशाबोध हुन सकेको छैन । पहिलो वर्षको सरकारी बजेटले कताकति आशा पनि जगाएकै थियो । डुइङ बिजनेस इन्डेक्सलाई देखाउँदै सरकार अब लगानीका लागि निर्धक्क भएर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताइएकै पनि हो । तर निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्तालगायत समाजका अन्य सरोकारवाला किन सरकारसँग आश्वस्त हुन सकेनन्– यसको जवाफ सिंहदरबारले आफैँतिर फर्केर दिनुपर्छ । आर्थिक आँकडा र परिसूचक ठीकठाक राख्ने जिम्मेवारी जति छ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी समृद्धिका हिस्सेदारहरूको खलबलिएको मनस्थितिलाई ढुक्क बनाउन मिहिनेत लगाउनुमा छ ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पाटो बन्न गएको छ : नियन्त्रित गणतन्त्र । यसबारे नेपालले पछिल्ला महिनाहरूमा शृंखलाबद्ध रिपोर्ट, विश्लेषण प्रकाशन गरिरहेको छ । पछिल्लो आम चुनावका बेला गैरवामपन्थी खेमाले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउने आरोप लगाउँदा मतदाताले पत्याएनन् । तर तिनै आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी सरकार विभिन्न ऐन, कानुनमार्फत प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिच्न उद्यत छ । नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
ओलीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा केही सुनाम राखौँ भन्ने पक्कै लागेको हुँदो हो । ढिला हुँदैछ तर बेला बितिहालेको छैन । अलमल र आत्ममुग्धतामा २४ महिना गुजारेको सरकारसामु अब दुई विकल्प छन् । पहिलो– अघिल्ला सरकार पनि यसैगरी चलेका थिए भन्दै आत्मतुष्टि लिने र यो मनमौजीपन जारी राख्ने । दोस्रो– आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम पल्टाउने र त्यसको मार्गचित्र अक्षरश: पछ्याउने । पहिलो बाटो सजिलो छ तर त्यसले दुर्घटनातर्फ लैजाने निश्चित छ । दोस्रो बाटो निश्चय नै अप्ठेरो छ तर इतिहासमा ओली कस्तो नेताका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन चाहन्छन्, त्यसैले तय गर्नेछ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको विरासतले मात्रै अब ओलीको नाम धानिराख्न गाह्रो छ ।
बसन्त बस्‍नेत नेपाल म्यागजिनका सम्पादक हुन् ।
समय छँदै देखाइने अग्रसरता यही स्तरमा कायम रहे हामी सम्भवत: यो विश्वव्याधि छल्न सफल राष्ट्र...
स्वास्थ्य संकटकाल : मिलेर सामना गरौँ [विशेष सम्पादकीय]
यो संकटोन्मुख घडीमा गर्न सकिने न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्दा आज फेरि एक पटक राज्यका न...
कोरोना सन्त्रासबीच अभिभावक-राज्यको खोजी
संकटको मौका छोपेर उपभोक्ता लुट्‍ने कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । उनीहरूमाथि सरकारले तत्काल कार...
कोरोनाको नाममा कालाबजारियाको संक्रमण
निश्चित व्यक्तिको इच्छापूर्तिका लागि सिंगो प्रक्रिया बन्धक बनाउने कृत्य अब रोकिनुपर्छ ।...
प्रधानमन्त्रीले सरकारको बदनाम गरे, नेकपा सचिवालयले आफ्नै पार्टीको
भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताको वास्तवि...
राष्ट्रप्रति जवाफदेही नहुने सरकार केको राष्ट्रवादी ?
राजा गइसके, अब तिनलाई देखाएर दलहरूले आफ्ना गलत क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न सक्दैनन् । विदेशी ...
लोकतन्त्रको विकल्प छैन, कमसल शासनको विकल्प छ